လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း | Open Development Myanmar
ကျောင်းမှ ပြန်လာသော ကျောင်းသားများ၊ တာချီလိတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ။ Photo by United Nations Photo, via Flickr. Licensed under CC-BY-ND-2.0.
၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအ၇ာ သန်းခေါင်စာရင်း အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ ၅၁.၄၈ သန်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လူဦးရေတွင် လုံခြုံရေးနှင့် အခြား အခြေအနေ များကြောင့် သန်းခေါင်စာရင်း မကောက်ယူနိုင်သည့် ဒေသ အချို့၏ ခန့်မှန်းလူဦးရေ (၁.၂) သန်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရရှိသော လူဦးရေ စုစု ပေါင်းမှာ သန်း ၅၀ ကျော် ရှိပြီ ဖြစ်ရာ ယခု လူဦးရေ အရွယ်အစားသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံး ကောက်ယူ ရရှိခဲ့သည့် ၁၉၈၃ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း လူဦးရေထက် (၄၆) ရာခိုင်နှုန််း တိုးတက်လာသည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။1
၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း တွင် ဖော်ပြချက်အရ ၂၀၀၃ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ် လူဦးရေ တိုးနှုန်းမှာ (၀.၈၉) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ လူဦးရေတိုးနှုန်းသည် ၁၉၇၃ မှ ၁၉၈၃ ခုနှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် (၂.၀၂) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၃ မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကာလ အတွင် (၁.၄၁) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၃ မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ကာလ အတွင်း (၁.၃၈) လည်းကောင်း တသမတ်တည်း ကျဆင်းခဲ့သည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။2
ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက် အညွှန်း အချို့
လူဦးရေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကျေးလက်ဒေသ တွင် နေထိုင်ပါသည်။
လူဦးရေ စုစု ပေါင်း၏ (၆၅.၆) ရာခိုင်နှုန်းမှာ အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ် အတွင်း အလုပ်လုပ် နိုင်သည့် အရွယ် လူဦးရေ ဖြစ်ပြီး (၂၈.၆) ရာခိုင်နှုန်း မှာ အသက် (၁၅) နှစ်အောက် ကလေးအရွယ် များ နှင့် (၅.၈) ရာခိုင်နှုန်းမှာ အသက် (၆၅) နှစ်နှင့် အထက် သက်ကြီး ရွယ်အိုများ ဖြစ်သည်။3
အသက် (၁၅) နှစ်နှင့် အထက် လူဦးရေအတွင်း လက်ရှိ အိမ်ထောင် ရှိသူ များတွင် ယောကျ်ားလေးများ မှာ ပိုမို ပြီး (၆၁ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် မိန်းကလေးများ မှာ (၅၈ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိပါသည်။ လူငယ်များအတွင်း (အထူးသဖြင့် အသက် (၁၅-၂၄) အုပ်စု) တွင် အပျို/လူပျို ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
အသက် (၁၅) နှစ်နှင့် အထက် လူဦးေ၇ (၃၃.၉) သန်းအနက် (၃၀.၃၇) သန်းမှာ စာတတ်မြောက်ကြောင်း ဖြေဆိုခဲ့ရာ စာတတ်မြောက်မူ့ ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၈၉.၅ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိပြီး စာမတတ်သူ ဦးရေမှာ (၃.၅၅) သန်းရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
မျှော်မှန်း သက်တမ်း ကျား (၆၃.၉) နှင့် မ (၆၉.၉)4
မြန်မာ အစိုးရ အနေဖြင့် နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကြာ ကောက်ယူနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သော ပြည်လုံးကျွတ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်း အရာ သန််းခေါင်းစာရင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းများကို ၁၉၇၃ ခုနှစ် တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် နှင့် ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ တွင် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။
သန်းခေါင်စာရင်း ၏ ထူးခြားသော အရည် အသွေးတစ်ခုမှာ အုပ်ချုပ်မူ့ ဧရိယာ အသေးငယ်ဆုံး အဆင့်ထိ အချက် အလက် များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း ပင် ဖြစ်ပြီး ကောက်ယူရရှိသော အချက်အလက်များ သည် အုပ်ချုပ်မူ့ နယ်ပယ် အဆင့်တိုင်းတွင် ထိရောက်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း များ ရေးဆွဲခြင်း၊ အထောက်အထား အပေါ် အခြေခံသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း တို့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး ကောက်ယူခဲ့သော သန်းခေါင် စာရင်းအား ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေ ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မိတ်ဖက်နိုင်ငံ များက ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာ နှင့် နည်းပညာ အကူအညီ များ ပေးခဲ့ကြပြီး လူ၀င်မူ့ ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန မှ ဦးဆောင် ကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 5သန်းခေါင်စားရင်းများက မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည့် အရာများ မှာ –
လူဦးရေ အရွယ်အစားနှင့် ၀ိသေသ လက္ခဏာများ
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် မြို့တော်များ၏ လူဦးရေ အရွယ်အစား
သက်သေခံ ကဒ်ပြား အမျိုးအစားများ
စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
အိမ်ထောင်စုအတွင်း အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများ
သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ဆယ်ရက်ကျော် အချိန်ယူခဲ့ရပြီး တစ်အိမ််တက် တစ်အိမ််ဆင်း ကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး ကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းခေါင်စာရင်းအား ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှ ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကောက်ယူခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် သန်းခေါင်စာရင်း ရည်ညွှန််းချိန်် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံ အချိန််တွင် မြန််မာနိုင်ငံအတွင်း ရှိနေသူ အားလုံးကို စာရင်း ကောက်ယူခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြည်ပရှိ သံရုံးများတွင် တာ၀န်ထမ်းဆောင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ နှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစု ၀င်များ အားလည်း သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ထည့်သွင်း ကောက်ခံခဲ့ရာ အဆိုပါ မိသာစုများ ၏ လူဦးရေမှာ အယောက် တစ်ထောင်အောက် သာ ရှိသဖြင့် နေပြည်တော် တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားခဲ့သည်။6
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ သိပ်သည်းဆမှာ တစ်စတုရန်း ကီလိုမီိတာတွင် (၇၆) ဦး နေထိုင်လျှက်ရှိပါသည်။ အရှေ့တောင် အာရှ တွင်် အကြီးဆုံး ကုန်းမကြီး ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ သိပ်သည်းဆ သည် ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် မလေးရှား နိုင်ငံတို့နှင့် မကွာခြားသော်လည်း ဒေသတွင်း တွင် လူဦးရေ သိပ်သည်းဆ အနည်းဆုံး နိုင်ငံများ ထဲမှ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။7တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်အားလုံးတွင် လူဦးရေ တိုးပွားလာသောကြောင့် လူဦးရေ သိပ်သည်းဆမှာလည်း တစ်နိုင်ငံလုံး တွင် တိုးမြှင့်လာရာ အထူးသဖြင့် မြို့ပြဒေသများ တွင် သိပ်သည်းဆ ပိုမို များပြားလာသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အချက်အချာ မြို့တော် ဖြစ်သော ရန်ကုန် မြို့သည် လူဦးရေ သိပ်သည်းဆ အများဆုံး ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။
1. The 2014 Myanmar Population and Housing Census Report Volume 2-B The Union Report: Occupation and Industry: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=the-2014-myanmar-population-and-housing-census-census-report-volume-2-b-the-union-report-occupation
2. 2014 Myanmar Population and Housing Census: Figures ataGlance: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=2014-myanmar-population-and-housing-census-figures-at-a-glance
3. The 2014 Myanmar Population and Housing Census Report Volume 2-B The Union Report: Occupation and Industry: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=the-2014-myanmar-population-and-housing-census-census-report-volume-2-b-the-union-report-occupation
4. The 2014 Myanmar Population and Housing Census Report Volume 2-B The Union Report: Occupation and Industry: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=the-2014-myanmar-population-and-housing-census-census-report-volume-2-b-the-union-report-occupation
5. The Population and Housing Census of Myanmar, 2014. Summary of the provisional results: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=the-population-and-housing-census-of-myanmar
6. The Population and Housing Census of Myanmar, 2014. Summary of the provisional results: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=the-population-and-housing-census-of-myanmar
7. Population density from 1995 to 2000 Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam and Cambodia: https://opendevelopmentmyanmar.net/dataset/?id=population-density-from-1995-to-2013-thailand-myanmar-laos-vietnam-and-cambodia
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုချင်းစီရှိ အသက်(၅)နှစ်အရွယ် ကလေးအရေအတွက်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် CBR - TFR ၊ TMFR နှင့် မွေးဖွားစကလေးသေဆုံးမှုနှုန်း
အတက်ပညာဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအလုပ်အကိုင်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် နယ်မြေအကျယ်အဝန်းနှင့် လူဦးရေသိပ်သည်းမှုအနေအထား
၂၀၁၄ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသန်းခေါင်စာရင်း - မြို့နယ်များရှိအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ
လူဦးရေအချိုးအစား စစ်တမ်းကောက်ယူလေ့လာမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပညာရေး၀န်ဆောင်မှုများ
၂၀၁၄ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသန်းခေါင်စာရင်း- ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီများရှိလူဦးရေနှင့်အိမ်ထောင်စုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ကျားမနှင့် အသက်အရွယ်အုပ်စုအလိုက် အလုပ်သမားအင်အားပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှု
Population density from 1995 to 2000 Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam and Cambodia
(၂၀၁၄) ခုနှစ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း - ကိန်းဂဏန်းအချက် အလက်များကို တစ်ချက်စောင်းငဲ့ကြည့်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုစီးပွားဖြစ်တိုးချဲ့ခြင်း - သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်မြေယာပဋိပက္ခများကိုချိတ်ဆက်ဖော်ပြခြင်း
ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး - အခြေအနေလေ့ လာဆန်းစစ်မှုအစီရင်ခံစာ
၂၀၁၄ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနှင့်အိမ်ရာသန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာအတွဲ ၂ အပိုင်း ခ - ပြည်ထောင်စုအဆင့်အစီရင်ခံစာ - အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများ
မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား ၊ ကလေးလုပ်သားနှင့် ကျောင်းမှလုပ်ငန်းခွင်သို့ကူးပြောင်းစအနေအထား (အလုပ်သင်အခြေအနေ) ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုစစ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်
FAOSTAT နိုင်ငံတွင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းကျဉ်း - မြန်မာ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်စနစ်အတွက် ငါးနှစ်တာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း( ၂၀၁၁-၂၀၁၅)
USAID property rights and resource governance country profile - Burma
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင် ထောင်ပေါင်းများစွာ မှာ ကျန်းမာရေး စောက်ရှောက်မူ့ မရရှိ
ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ အား အသရေ ဖျက်မူ့နှင့် တရားစွဲဆို
ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမူ့ တွင် စိုးရိမ်ဖွယ် အဆင့်၌ ဆက်လက်တည်ရှိနေ
မြန်မာ ကလေး မွေးဖွားနှုန်း မြင့်မားခြင်းသည် စိုးရိမ်ဖွယ် ဖြစ်ကြောင်း သန်းခေါင်စာရင်း အချက်များ ပြဆိုနေ
သန်းခေါင်စာရင်း အချက်အလက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၈၇.၉ ရာခိုင်နှုန်း မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်
မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၅၁.၅ သန်းသို့ ရောက်ရှိ
ရန်ကုန်မြို့ လူဦးရေ သိပ်သည်းဆ ပျဉ်းမျှ တစ်စတုရန်းမိုင်လျှင် ၁၆၀၀၀ သို့ရောက်ရှိ